« CONTROLE DE LEGALITE » : Mety hihaona anio ny Préfet sy ny Federasionan’ny fitaterana
Raha tsy misy indray ny andrasoandraso ataon’ny Préfet noho ireo adidy aman’andraikitra maro sahaniny, dia anio alatsinainy no mety hitohy ny fifampidihana momba ny « Contrôle de légalité ». 31 mai 2016
Raha ny tsilian-tsofina farany voaray tamin’ny mpikambana iray tamin’ireo Mpanolotsaina monisipaly, dia efa tonga eny amin’ny Préfet ny fanapahan-kevitry ny Mpanolotsaina monisipaly, izay mangataka ny hampidinana ho 50 000 Ariary ny saran’ny fahazoan-dalana miasa na « licence », izay tokony haloan’ny bajaj, raha 200 000 Ariary izany araka ny lalàna navoakan’ny Kaominina farany teo.
Lasa resabe fotsiny teo ambony latabatra ny fifampiraharahana nataon’ity solontenam-panjakana ity sy ny Federasiona mpiahy ny fitaterana, ka tsy nahavanona ny fitokonana saika ho natao indroa nifanesy izay. Milaza ny Federasionan’ny fitaterana fa nanelanelana hatrany ny Fanjakana sy ireo tompona bajaj saika nitroatra nanoloana ny fiakaran’ny « licence » ity saingy izao indray no ataon’ny sasany ho tohatohatra fampanginana ny bajaj fotsiny izany ny izy ireo, raha ny voalazan’ny filohany.
Na izany aza dia mbola manan-kery hatreto ilay hetra 200 000 Ariary efa tapaka, izay efa aman-jatony mahery ireo bajaj efa nahaloa ny anjarany. Resy lahatra ary tsy miombon-kevitra amin’ireto saika hanao fihetsiketsehanana ireto efa nandoa. « Alanenina farany izany izao fifanatonana hangatahin’ny Federasiona amin’ny Préfet izao, dia hisy indray ny fanapahan-kevitra vaovao », hoy hatrany ny federasiona mpiahy.